धर्म सस्कृति Archives - Sawal Nepal
हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार व्यक्तिको हत्केलामा बनेका रेखाका आधारमा उसको जीवनको भूत, भविष्य र वर्तमानको स्थिती जान्न सकिन्छ । हत्केलामा बनेका कैयौं प्रकारको रेखाले ब्यक्तिको जीवन चित्रण गर्दछ । हत्केलाका रेखामा जीवन रेखा, स्वस्थ्य रेखा र भाग्य रेखा समेत हुने गर्दछ । यी रेखाका अतिरीक्त हत्केलामा केहि पर्वत समेत बनेको हुन्छ । जसमा शनि पर्वतको खास
काठमाडौं । वर्तमान कालमा पहिलाको जस्तो कोहि श्राद्ध-पक्ष इत्यादि गर्दैनन् र साधना पनि गर्दैनन् । त्यसैले अधिकतर सबैलाई पितृदोष (पूर्खाको अतृप्तिको कारण कष्ट) हुन्छन् । आउने दिनहरुमा पितृदोषको सम्भावना छ या वर्तमानमा भई रहेको कष्ट पितृदोषको कारण हो, यो केवल महान् पुरुषले नै बताउन सक्छन् । कुनै महान् पुरुषसँग भेट सम्भव छैन भने यहाँ पितृदोषको
तपाइँले बाटोमा हिडिरहेको बेलामा पैसा भेट्नु भएको छ ? टिप्नु पनि भएको होला ? यस्तो पैसा भेट्नुलाई कतिले शुभ र कतिपयले अशुभको रुपमा लिने गरेका छन् । भेटिएको पैसालाई कसैले व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कतिपयले भेटिएको पैसा खर्च गर्न नहुने भन्दै धार्मिक स्थलमा दिने वा धार्मिक काम गर्ने गरेका छन् भने केहीले
त्रेता युगमा भगवान् विष्णु श्रीरामचन्द्रको अवतारमा आउनुभयो । सो समय धर्मपत्नी देवी सीता जो माता लक्ष्मीको अवतार हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अपहरण लंकापति रावणले गरेका थिए । तब श्रीरामचन्द्रले बाँदर सेनाको मद्दतबाट देवी सीतालाई मुक्त गर्नको लागि सेतुबंध निर्माण गराइ रहनुभएको थियो । श्रीरामचन्द्र पुलको निर्माणमा शक्तिशालि बाँदर विशाल पर्वतबाट ठुला ठुला पत्थर ल्याएर समुन्द्रमा हालि
काठमाण्डौ । छठ पर्वको मुख्य दिन आज शुक्रबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ्य दिइँदैछ । कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने छठ पर्व बुधबारदेखि सुरु भएको हो । कोरोना महामारीका कारण यसवर्ष घरघरमै छठ पर्व मनाउने तयारी भइरहेको छ । सरकारले पनि घरमै छठ पर्व मनाउन अनुरोध गरेको छ । छठ पर्वको पहिलो दिन
वास्तु शास्त्र अनुसार शौचालय कुन दिशामा बनाउने ?
एजेन्सी । वास्तु एउटा यस्तो पूरानो विज्ञान हो जसको मान्छेको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । वास्तु हरेक स्थानमा काम लाग्छ । जस्तो वास्तु अनुसार शौचालयको पनि खास दिशा निर्धारित छ । त्यसैले चाहे घर होस् या कार्यालय शौचालय निर्माण गर्दा वास्तुलाई ध्यान दिनुपर्छ । वास्तुशास्त्रका अनुसार शौचालय घर घरको दक्षिण – पश्चमी दिशाको बीचमा
यस वर्ष विवाहका लागि साइतका ४ दिन मात्र बाँकी
काठमाण्डौ । मंसिरको महिना विवाहको महिना मानिन्छ । तर यो वर्ष विवाहको साइत तुलनात्मक रुपमा कम रहेको नेपाल पञ्चाङग निर्णायक समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यस वर्ष जम्मा १८ दिन मात्र विवाहको साइत रहेको छ । त्यसमध्ये पनि साइतका १४ दिन गइसकेकोले अब ४ दिन मात्र विवाहको साइत बाँकी रहेका छन् । बाँकी चारै
तराई भेगका साथै देशका विभिन्न स्थानमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने रौनकता छाएको सन्देशमूलक यो गीत अहिले यत्रतत्र गुञ्जायमान छ । हिमाल, पहाड र तराईवासीलाई एकै सूत्रमा जोड्ने सेतुका रूपमा स्थापित भइसकेको छठ पर्वका लागि यस पटक कोरोना सङ्क्रमण कहरबीच नदी र पोखरीमा घाट निर्माण र सजावटको कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको सन्देश यो गीतले दिइरहेको छ । मूल
भाइटीका लगाउँदा कता फर्किने ? कुन-कुन रंग प्रयोग गर्ने ?
कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका ग्रहण गर्दैछन् । यमपञ्चकको पाँचौंँ दिन आज भाइटीका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परानुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइँदैछ ।​ दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई
काठमाण्डाै – यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई, गोरु, कृषक र गोवर्द्धनको पूजाआजा गरी मीठो खानेकुरा खान दिएर मनाइँदैछ । गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो । गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जत्तिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई ‘माता’ कै रूपमा सम्मान गरिन्छ । स्थानीय जातका गाईमा हुने जुरोले सूर्य
कुन बेला शेयर किन्ने र बेच्ने ? यस्ता छन् अचुक सुत्र
थाहा पाउनुहोस् भिटामिन डीको कमीमा देखिन्छन् यस्ता लक्षण
त्रिविका क्याम्पसहरूमा भौतिक उपस्थितिमै पढाइ सञ्चालन हुने